गगन र विश्वप्रकाशले नयाँ नमुना पेस गर्न सक्लान्, ल गगन अघि बढ विश्वप्रकाश साथमा छ भनेर भन्न सकिएला ।- विश्वप्रकाश शर्मा (अन्तवार्ता) - हरियाली नेपाल
# राप्रपा महाधिवेशन ‘प्रचण्ड’ माओवादी केन्द्र #राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड # काँग्रेस महाधिवेशन कोरोना सर्वोच्च
गगन र विश्वप्रकाशले नयाँ नमुना पेस गर्न सक्लान्, ल गगन अघि बढ विश्वप्रकाश साथमा छ भनेर भन्न सकिएला ।- विश्वप्रकाश शर्मा (अन्तवार्ता)
सभापति एउटा पद हो, त्यहाँ एकजनाको मात्रै व्यवस्था छ । महामन्त्री पद एउटा हो, त्यसमा दुई जना रहने व्यवस्था छ । समग्रमा महामन्त्री भन्ने चरित्र, स्वरुप, अधिकार त एउटा हो नि ! संगठन विस्तारित र बृहत भयो र न दुईवटा महामन्त्रीको व्यवस्था गरिएको हो । तर सारमा संगठनको महामन्त्री जुन हो, त्यो एकीकृत रुपमा एकतावद्ध बुझ्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने विषय हो । यसलाई कसरी पनि बुझ्नुस्, विगतका कुनै कालखण्डमा काँग्रेस पार्टीभित्र दुईवटा नेतृत्व देखिँदै गर्दा त्यसको बीचमा द्वन्द्वमात्रै भइरहेको भन्ने कोणबाट हेरेर अब पनि द्वन्द्व होला भन्ने होइन । दुईटा नेतृत्व विकसित हुँदै गर्दा विकसित हुँदै गएको नेतृत्वले के बुझ्नुपर्छ भने हामीभन्दा सुयोग्य र हामीलाई नेतृत्व गर्नेहरु हाम्रै कार्यसमितिभित्र पनि हुनुहुन्छ र हामीभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा प्रतिपक्षी र उहाँको बीचमा द्वन्द्व थियो कि थिएन ? तर संवैधानिक परिषदको एउटा बैठकमा बाहिरी जिल्ला जानु परेको बाहेक संवैधानिक परिषदको बैठकमा हाम्रो सभापति गइराख्नु भएको थियो । सर्वदलीय बैठकमा पनि नियमित गइराख्नु भयो । कुनै बेला एक्लै प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्न बोलाउँदै गर्दा किन गए शेरबहादुर देउवा भनेर आलोचना भयो । हामी त्यो ढंगको लचकता राख्छौं । अहिले जति राष्ट्रिय विषय भन्नु भएको छ । यी समग्र विषयमा जानका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । किन काँग्रेसको सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालकोट जानु भयो त ? किनभन्दा कमरेड केपी ओली बालकोटमा घुर्की लगाएर बसिरहनुभयो । हामी लचक भएर गयौं । उहाँ सर्वदलीय बैठकमा नआउने, एक्लै बोलाउँदा पनि नआउने, घरमा जाँदै गर्दा पनि हात मिलाउन हिच्किचाउने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिँदैन । कुनै पनि विषयमा पक्ष र विपक्ष हुन सकिएला । तर छलफल त हुन सक्छ नि ! प्रतिपक्षले संवादहीनता राख्न खोजेको छ ।
मैले दुई चोटी भंग गरेको संसदलाई चल्नै दिन्न, यो चल्दै चल्दैन भन्ने खालको मानसिकता राख्ने कुराले यो ‘डेडलक’ भएको हो । राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा सत्ता पक्षले पहल गर्न खोजेन भन्ने होइन । तपाईले भनेका यही हरेक विषयमा पहल गर्न खोजेको छ । विपक्षी संसद खोलेर कुनै पनि विषय पक्ष र विपक्षमा उभिने कुरामा तयार नहुँदा राष्ट्रिय राजनीतिले निकास पाउन सकेको छैन । कमरेड केपी ओलीले दुई वटा कुरालाई स्मरण गरिदिए हुन्थ्यो । एउटा कुरा उहाँको कार्यकक्षमा सहिष्णुता कोमामा सुतिरहेको छ । त्यसलाई ब्युँझाइदिए हुन्थ्यो । देशको प्रधानमन्त्री भएको सहिष्णुतालाई आफ्नो कार्यकक्षमा सुताइदिएको सुहाएको छैन । दोस्रो कुरा, कुनै पनि विषयमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तले भनेको कुरा हामीले मानौं । संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ को ५ लाई कार्यान्वयनमा लैजान परमादेश दिन्छ । उसले भनेको नमान्ने भए संवैधानिक इजलास किन बनाएको धारा ७६ को ५ किन लेखेको त्यसलाई पालना नगर्ने भए ? सभामुखलाई त्यो अधिकार किन दिएको, त्यो निर्णय नमान्ने भए ? विधि भित्रबाट भएको निर्णयलाई मान्ने विवेक र कोमामा सुताइएको सहिष्णुता दुई वटा कुरालाई ब्युँताइयो भने राजनीतिका सबै समस्या हल भएर जान्छ ।
साथीको त्यो सोचलाई मैले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ । के कुरामा प्रस्ट हौं भने पार्टीमा सभापतिको दुई तिहाइ छ । अरु केही होइन भन्ने होइन । त्यो दुई तिहाइ सभापतिको मात्र हो, अरुको होइन भन्ने पनि होइन । कार्यसमिति भन्ने हुन्छ, संस्था भन्ने हुन्छ । संस्थागत निर्णय हुनुपूर्व सबैले सार्वजनिक रुपमा बोल्नु होला, कसैले नबोल्नु होला । तर पार्टीले ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन्छ । रातोपाटी